အရသာရှယ်ဂွတ်တဲ့မာလာရှမ်းကောကို အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းမခံဘဲ ဖုန်းဆက်ပြီးမှာယူနိုင်မယ့် ….. – FoodiesNavi
အရသာရှယ်ဂွတ်တဲ့မာလာရှမ်းကောကို အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းမခံဘဲ ဖုန်းဆက်ပြီးမှာယူနိုင်မယ့် …..
By yin sandi On March 8, 2018 0
အကောင်းကြိုက်ပြီးသန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ Home made မာလာရှမ်းကောလေးကို မှာစားချင်သူများအတွက် Foodies Navi ကနေ သတင်းကောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ မာလာရှမ်းကောတော့ကြိုက်ပါရဲ့ အကြာကြီးစောင့်ရတာကိုတော့မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ foodies တို့အတွက် စားမယ့်အချိန်မတိုင်ခင် ကြိုတင်မှာယူလိုက်ရုံနဲ့ အိမ်မှာထိုင်နေရင်း ဇိမ်ကျကျလေးနဲ့စားသုံးနိုင်ဖို့ အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Wat Tone Lay မာလာရှမ်းကော Online Shop အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဆိုင်တွေမှာသွားစားသလို မာလာရှမ်းကောမှာပါဝင်ပေါင်းစပ်မယ့် အမယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်မရွေးချယ်ရလို့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ။ Foodies တို့အကြိုက်ကျပြီးသား ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်း ၊ ဆူကာညွန့် ၊ ကန်စွန်းရွက် ၊ ပန်းစိမ်း ၊ အပ်မှို ၊ အီတာရှီကီမှို ၊ ကြာစွယ် ၊ အာလူး ၊ Baby Corn ၊ ကျောက်ပွင့် ၊ မာလာခေါက်ဆွဲ ၊ ဝက်/ကြက်သား ၊ ရှယ်ဝက်မှိုလုံး ၊ ငါးအသားလုံး ၊ ငါးဥနှစ်ချိစ်လုံး ၊ Sea Urchin အဝါလုံး ၊ Chicken Sausage တွေကိုအသုံးပြုကာ ဖန်တီးချက်ပြုတ်ထားတာဖြစ်ပြီး Foodies တို့ရှောင်ချင်တဲ့အမယ်တွေကိုလည်း ကြိုပြောထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ စိတ်တိုင်းကျမှာအသေအချာပါပဲ။ မာလာရှမ်းကောကို အရည်နဲ့အကြော်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရွေးချယ်မှာယူနိုင်တာကြောင့် အရည်လေးနဲ့စိုစိုဖတ်ဖတ်လေးစားမလား ?? အရည်မကြိုက်လို့ ခြောက်ခြောက်လေးကြော်ထားတာကို စားမလား ?? စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရနိုင်မှာပါ။
အရသာအနေနဲ့ကတော့ regular(ပုံမှန်စပ်) ၊ medium(ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းပိုစပ်) ၊ large Spicy (စပါယ်ရှယ်စပ်)ဆိုပြီး အထုံအစပ်တွေကို စိတ်တိုင်းကျချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။ Home made ဆိုပြီးအရသာကိုလျှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့ အချိုမှုန့်မသုံးဘဲချက်ပြုတ်ထားတာတောင်မှ ဆိုင်ကြီးတွေမှာစားတာထက်မလျော့တဲ့ အရသာအရည်အသွေးကို အပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ပမာဏကတော့ Regular set ဆိုရင် 1250ml ဘူးကြီးနဲ့တစ်ဘူးအပြည့်ပါဝင်ကာ ၁၂၀၀၀/၁၃၀၀၀ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံးလူ ၂ယောက်အဝကြိတ်လို့ရပါတယ်။ Single set ဆိုရင်တော့ ၈၀၀၀/၉၀၀၀ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Wat Tone Lay မာလာရှမ်းကော Online Shop ဟာ တာမွေကျိုက္ကဆံလမ်းမပေါ် ၊ သတိပဌာန်လမ်းထိပ်မှာတည်ရှိတာကြောင့် Delivery နဲ့မှာယူလို့ရသလို ကြိုတင်ဖုန်းဆက်မှာယူပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားယူလို့လည်းရတယ်နော်။ တစ်နေရာထဲကို Regular set (၃)ပွဲနဲ့အထက်မှာယူရင်လည်း Delivery Free ရရှိဦးမှာဆိုတော့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းခံပြီးသွားစားနေစရာ မလိုတော့ဘူးနော်။ မှာယူဖို့အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 09429778429 ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/wattonelay
In Restaurant Guides Tagged mala shan kaw Leaveacomment
ထိရှတဲ့အရသာကို တမြေ့မြေ့ခံစားပြီး Hot Pot နဲ့ BBQ ကိုအဝတီးနိုင်ဖို့ ….
ပုဂံကိုအလည်သွားရင်း မြန်မာထမင်းဟင်းလက်ရာကောင်းပြီးစျေးတန်တဲ့ ထန်းရိပ်သာမှာဝင်စားကြမယ်